» न्युयोर्क लगायतका अध्यागमन अदालतमा नियमित सुनुवाई अब चुनावपछि
न्युयोर्क लगायतका अध्यागमन अदालतमा नियमित सुनुवाई अब चुनावपछि
२०७७ आश्विन २७,मंगलवार ०१:००
न्युयोर्कको अध्यागमन अदालत हिराशतमा नरहेकाहरुको सुनुवाईका लागि कम्तीमा नोभेम्बर ३ को चुनाव अगाडि नखुल्ने भएको छ । एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले नियमित सुनुवाई अक्टोबरमा सुचारु नहुने जनाएको हो । न्युयोर्कको भेरिक स्ट्रीट र फेडरल प्लाजामा रहेका अध्यामगन अदालतहरु हिराशतमा नरहेकाहरुको सुनुवाईका लागि कम्तीमा अक्टोबरभर बन्द रहनेछन् ।
यी अदालतहरुमा फाइलिङ र हिराशतमा रहेकाहरुको सुनुवाई भने जारी नै रहेको छ । त्यस्तै न्युयोर्कको ब्रोडवेमा रहेको अध्यागमन अदालत पनि फाइलिङका लागिमात्र खुल्ला रहेको छ ।
अध्यागमन अदालतमा हिराशतमा रहेकाहरुबाहेक अन्यको सुनुवाई हुन नसक्दा कैयन नेपालीहरु मारमा परेका छन् । एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युका अनुशार अमेरिकाका अध्यागमन अदालतहरुमा नेपालीहरुका ३८७६ केसहरु पेन्डिङ रहेका छन्, जसमध्ये ३८३४ केसहरु इमिग्रेशन सम्बन्धित रहेका छन् । १३ वटा केसहरुभने अपराधसँग सम्बन्धित रहेका छन् । इमिग्रेशनका नेपालीका पेन्डिङ केसहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै न्युयोर्कको फेडरल प्लाजामा १६६९ केसहरु रहेका छन् ।
न्युयोर्क राज्यका ४ वटा अदालतहरुमा नेपालीका पेन्डिङ इमिग्रेशन केसहरु २०२३ रहेका छन्, जसमध्ये ब्रोडवेको अध्यागमन अदालतमा २२८, भेरिक स्ट्रीटमा १२३ र बफेलोमा ३ वटा इमिग्रेशन केसहरु रहेका छन् । न्युयोर्कपछि क्यालिफोर्नियामा १०२६ नेपालीका इमिग्रेशन केसहरु पेन्डिङ रहेका छन् । क्यालिफोर्नियाका ५ सुनुवाइस्थलमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपालीका पेन्डिङ केसहरु सान फ्रान्सिस्कोमा रहेका छन् ।
नेपालीका अधिकांश अध्यागमन केसहरु एसाइलमसँग सम्बन्धित रहेका छन् । पछिल्लो समयमा मेक्सिकोबाट अमेरिकी सिमाक्षेत्रमा आएर विना भिसा अमेरिका प्रवेश गर्ने क्रममा पक्राउ परेर एसाइलम दावी गर्ने नेपालीहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट संचालित khasokhas.com र नेपालबाट संचालित tukhabar.com बीचको सहकार्यका आधारमा साभार गरिएको सामग्री । सम्पादक
म अमेरिकामा नै छु, के मैले अमेरिकाबाटै डिभी लोटरी भर्न सक्छु ?
डिभी आवेदन फारममा परिवारका कुनकुन सदस्य उल्लेख गर्नुपर्ला ?
अमेरिकी कामदार भिसामा कडाई गर्ने नयाँ नियम भोलि फेडरल रजिस्टरमा, डिसेम्बर ७ बाट लागु हुने
डिभी लोटरी भर्ने अवधि सुरु, अन्तिमसम्म नकुर्न सुझाव
अक्टोबर १३ देखि बुबाआमा र हजुरबुबाआमालाई क्यानडाको पीआर स्पोन्सर खुल्ला
दशैंसित नेपाली सर्जकको नाता
विपन्न परिवारलाई सहयोगी मन नेपालको सहयोग
मुख्यमन्त्री पौडेललाई उपचारको लागि काठमाडौँ लगियो
टीकाको साइत १०ः११ बजे
मकवानपुरको मनहरी–२ मा नकआउट फुटबल प्रतियोगिता सुरु
मकवानपुरमा शुक्रबार बिहानै थपिए २१ जना कोरोना संक्रमित, सबैभन्दा धेरै हेटौंडाका
दसैं सुरक्षाः देशभर ४८ हजार ८ सय प्रहरी परिचालन